कांग्रेसले ७ वटै प्रदेशमा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने – Nava Nepal Times
नवनेपाल टाईम्स ६ श्रावण २०७६, सोमबार
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सात वटै प्रदेशमा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने भएको छ । केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि साउन १६ गतेदेखि दुई दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
आइतबारको बैठकले ७ प्रदेशका १२ ठाउँमा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिष्ठानका सचिव मुक्ति आचार्यका अनुसार प्रतिष्ठानले डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलको संयोजकत्वमा प्रतिष्ठानको आधार पाठ्यक्रम निर्माण समिति समेत गठन गरेको छ ।
समिति सदस्यहरुमा डा. आरजु राणा देउवा, हरिहर विरही, राजु नेपाल र प्रसिस महरा रहेका छन् ।
त्यस्तै तारानाथ दाहालको संयोजक, भद्रा पराजुली भण्डारी र रामजी कंग्रेन सदस्य रहने गरी निर्दे्शिका निर्माण समिति गठन गरिएको छ ।
स्रोत व्यवस्थापन समितिमा खिलानाथ दाहाल संयोजक र सदस्यहरुमा सुभाष पोखरेल, डा. प्रभु बुढाथोकी, भद्रा पराजुली भण्डारी, कमला लामिछाने, भगिरथ पोद्धार र योगराज शर्मा कँडेल चयन भएका छन् ।
प्रतिष्ठानले कांग्रेसबाट विजयी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरुको राष्ट्रिय प्रशिक्षण कार्यक्रम काठमाडौंमा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । via: https://www.onsnews.com/congarsa/